Maxkamadda darajada koowaad oo xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal – Radio Muqdisho
Maxkamadda darajada koowaad oo xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta u fadhiisatay dacwad ciqaabeed loo haystay in ka badan 10 eedeysane ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaashaasi.
Fadhiga dhageysiga dacwadda oo ka dhacda degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa xafiiska xeer ilaalintu waxa ay Maxkamadda horgeysay eedeymihii loo haystay eedeysanayaasha oo ay ugu weyneyd jidgooyooyin ay u dhigan jireen dadka iyo gaadiidka halkaasi isticmaala.
Eedeysanayaasha maxkamadda la horgeeyay ayaa waxaa ku jiray mid qabay dhaawacyo ka soo gaaray xilligii ay ciidamada xoogga dalka ay jidgooyooyinka ka qaadayeen goobihii ay dhigteen maleeshiyadka maxkamadda la horgeeyay.
Caddeymo iyo marqaatiyaal kaddib ugu dambeynbtii Maxkamadda darajada Koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa ay eedeysanayaasha ku riday xukunno u dhexeeya saddex ilaa iyo 15-sano oo xabsi ciidan ah, waxaana ay Maxkamaddu amartay in la sii daayo saddex ruux oo lagu waayay eedeymihii lagu soo oogay.
Soomaaliya oo laga caawin doono xagga dib u dhiska